October 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 7:54 PM | No မှတ်ချက် |
ဘာမှဖြေစရာ မရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ပြောကြားချက် လူကြီးများ၏ သဘောထား မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာသံတော်ဆင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် မှတ်ချက်ပြု
ပြည်မြန်မာဂျာနယ်တွင် ဦးရဲထွဋ်ပြောကြားချက် တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုနေ
အီရတ်နိုင်ငံ အန်ဘာပြည်နယ် မှ မျိုးနွယ်စုဝင် လူ ၂၅၅ ဦးကို ISIS စစ်သွေးကြွ များသတ်ဖြတ်
ဟာဝိုင်ယီက ပေါက်ကွဲ မီးတောင်ချော်ရည် လူနေရပ်ကွက်များကို ရောက်ပြီ
ဖမ်းမိမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် တောင်ပိုင်း ဝ ခေါင်းဆောင်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ချိတ်ပိတ်ခံရ
KAF ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အားလုံးပါဝင်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်
Facebook ပို့စ်ကြောင့် ဆရာတဦး အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရ
ဘီလူးချောင်းတွင်း မျောပါသေဆုံးနေသူ အလောင်းအား ရဲများဆယ်ယူစစ်ဆေး
ကိုပါကြီးသေဆုံးမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာ အမြန်တင်ရန် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြား
ဂရန်၊ မှတ်ပုံတင်၊ လိပ်စာအတုဖြင့် မြေကွက်လွတ်တခုကို ကျပ်သိန်းသုံးထောင်ဖြင့် ရောင်းချသူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ လွှတ်တော်၊ ကာချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု အပါအဝင် ပါတီ ခေါင်းဆောင် တချို့ ဆွေးနွေး
သြော် မိန်းမ ....
Author: lubo601 | 6:53 PM | No မှတ်ချက် |
လင်မယားနှစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ခရီးထွက်လာတယ်
လမ်းခုလတ် ထမင်းဆိုင်မှာ ကားခဏရပ်ပြီး ထမင်းစားကြတယ်။
ထမင်းစားပြီးလို့ ပြန်ထွက်လို့ အတော်လေးလည်း မောင်းမိရော ယောက်ျားလုပ်သူက ပြောတယ်… ..::
“ဟာ… မိန်းမရေ၊ ခုနက ထမင်းဆိုင်မှာ ငါ့ဦးထုပ် မေ့ကျန်ခဲ့ပြီကွာ၊ သွားပြန်ယူမှပဲ”
Author: lubo601 | 6:52 PM | No မှတ်ချက် |
ပြောမဲ့သာပြောရတယ်။ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း အမှတ်သည်းခြေသိပ်ရှိတဲ့ကောင်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ကျုပ်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အလုပ်သမားကဒ်လုပ်ဖို့ ဖူးခက်မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးဆီရောက်ခဲ့တုန်းက ကျုပ်ရင်ထဲမှာ မကောင်းလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျ မိတဲ့အကြောင်း ရေးခဲ့တဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုခင်ဗျား မှတ်မိမယ်ထင်ပါရဲ့။
Author: lubo601 | 1:22 PM | No မှတ်ချက် |
Ka Yin Lay's photo.
feel မမှန်လို့ အထီးကျန် နေတဲ့ည။
စေတနာ နဲ့ နေရာ
Author: lubo601 | 1:13 PM | No မှတ်ချက် |
Shweaeimsi Samsung Aeimsi
လူ့စိတ်ဟာ အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတတ်သလို လူတိုင်းမှာလည်း စိတ်ကောင်းနဲ့စိတ်ဆိုးဆိုတာရှိပါတယ်။ တချို့ကလည်း လူ့စိတ်ဟာ မျောက်နဲ့တူတယ်လို့ ဆိုတတ်ကြပြီး၊ လူ့စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိတဲ့ နတ်ဆိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
မျောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ လူစိတ်က အခုအကောင်း၊ တော်ကြာတစ်မျိုးဖြစ်တတ်သလို၊
Author: lubo601 | 10:57 AM | No မှတ်ချက် |
သက်မွန်မြင့် နဲ့ ဆက်ဖွန်ခွင့် ပေးပါ ဆိုတော့
ဖွေးဖွေး နဲ့ အေးဆေး သော်လည်း မိုးယုစံ က တိုးလုပြန် တဲ့အခါ
ခင်နန်းထိုက် က ဝင်နမ်းလိုက် ....နန်းသူဇာ က ဖမ်းပူဆာ လိုက် နဲ့...
ဝတ်မှုံရွှေရည် က ကိုယ့်ကို စွတ်ယုံနေပြီ ဆိုတာ သူတို့ကိုပေးသိလို့လဲမရ....ဟူး
ဘ၀နဲ့သိက္ခာကိုရင်းပြီး သူတို့မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်
Because of Green (စိမ်းနေခြင်းကြောင့်သာ)
Author: lubo601 | 10:42 AM | No မှတ်ချက် |
နာမည်ကျော် ဒရမ်မာစီးရီး ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Love Story In Harvard ဇာတ်ကားထဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကိုမျက်စိထဲပြန်မြင်နေရတယ် ။ ဟားဗက်ဥပဒေကျောင်းရဲ့ တရားရုံးပုံစံငယ်တစ်ခုမှာ
အပြင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမှု တွေကို အုပ်စု ၂ စုခွဲပြီး တရားလိုဘက် ၊ တရားခံ ဘက် ရှေ့နေလိုက်ကြရင်း ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးငြင်းခုန်နေတာပါ ။ လူမည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က
စူပါမားကတ်မှာဈေးဝယ် ရင်း ပစ္စည်းခိုးတယ်လို့ စွတ်စွဲခံရတဲ့အတွက် ရှာဖွေခြင်းခံရပါတယ် ။ အဲဒီအတွက် အရှက်ရပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဝမ်းနည်းနာကျည်း မှုတွေနဲ့ နှလုံးရောဂါအခံပေါင်းစပ်ပြီး လူမည်းအမျိုးသမီး ဟာ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူမဲအမျိုးသမီး ရဲ့ ပက်သက် သူတွေ ဟာ စူပါမားကတ်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ စူပါမားကတ်တွေမှာ မယုံသင်္ကာဖြစ်လျှင် စစ်ဆေးခွင့်ရှိတာကြောင့် တရားလိုသေဆုံးမှု မှာ စူပါမားကတ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး စူပါမားကတ်ပိုင်ရှင်ကို အနိုင်ပေးခဲ့တယ် ။
Author: lubo601 | 10:30 AM | No မှတ်ချက် |
စစ်သွေးကြွတွေ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဘ၀ (ရုပ်/သံ)
ခရီးသည်တင်ယာဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရေမြောင်းထဲ ထိုးကျ ခြောက်ဦး သေဆုံး
ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ဒေါ်လာဘက်သို့ လှည့်လာ
ကော်သူးလေတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရန် သဘောတူညီချက်ရရှိ
ဂျေရုဆလင်က အထွဋ်အမြတ် နေရာကို အစ္စရေး ပိတ်
သမ္မတအိမ်တော် တွေ့ဆုံပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်မည်
ကိုထင်ကျော်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၄နှစ်ကျော်အပြစ်ပေးခံရ (ရုပ်/သံ)
ကိုထင်ကျော်ကို ကျောက်တံတား တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချ
သူပုန်ထောက်ပံ့မှုဟုဆိုကာ ရွာသားများအားဖမ်းဆီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မိုးမိတ်မြို့ စစ်ဗျူဟာရုံးသို့ ခေါ်စစ်
လိပ်ကျွန်းသူကြီးသား သတင်းစာရှင်းပွဲတွင် ဒီအန်အေ အစစ်ခံ
ဆီရီးယားတွင် ISIS အဖွဲ့က ဆီးရီးယားစစ်ဘက် အကြီးအကဲ ၇၀ ဦးကို ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့
ဟာသ စုဗူး (၂၀)
အမျိုးသမီး။ ။ ရှင်ဟာလေကျမနဲ့ ရပြီးကတည်းက ဒီဓာတ်ပုံတွေပဲရိုက်နေတာ ကျန်မကိုချစ်သူဘဝတုန်းကလောက် ချစ်သေးရဲ့ လာ
အမျိုးသား။ ။ချစ်တာပေါ့ကွ မနေ့ ကဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံ ကိုကြည့်ပြီး မင်းမျက်နှာတောင်မြင်ယောင်လာသေးတယ်
Author: lubo601 | 10:11 PM | No မှတ်ချက် |
စာသင်ခန်း တစ်ခုထဲကို ဆရာဝင်လာပါတယ်။ ယင်းနောက် ကျောင်းသား များ ရှေ့မှာ ဖန်ခွက်ထဲ ရေဖြည်လို့ ကိုင်မြောက်ပြီး ယခုလို စကားဆိုပါတယ်။
"တပည့်တို..။ ဒီဖန်ခွက်ကို ဆရာ ကိုင်မြောက်ပြီး ၁ မိနစ်တိတိနေမယ်။ အထဲမှာ ရေဘာဖြစ်သွားမလဲ"
ကျောင်းသားများ -- ဘာမှ ဖြစ်မသွားပါဘူး ဆရာ
Author: lubo601 | 10:10 PM | No မှတ်ချက် |
ကုို ကွန်း added2new photos.
၁။ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တတ်သောဖခင်
ဖခင်ကအိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တော့ မိခင်နဲ့ခဏခဏပြဿနာတက်တယ်။ အိမ်မှာနေ့တိုင်းဆိုသလို တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ ဘယ်သူ့မှသားသမီးကို မကြည့်အားဘူး။ သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ကို အရမ်း ထိခိုက် စေပါတယ်။ ကိုယ့်အဖေကိုကြည့်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုမဲ့အရွယ်ရောက်နေတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းလုံးဝမစဉ်းစားရဲတာ ကိုတွေ့ဖူးတယ်။
Author: lubo601 | 9:54 AM | No မှတ်ချက် |
ရှေးခါတုန်းက အင်ဂျင်နီယာ ၊ စာရင်းအင်းသမား၊ ဓာတုဗေဒပညာရှင်နှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦး စုစုပေါင်းလေးဦးက သူတို့၏စက်ရုပ်များ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ကို မိမိတို့နီးပါး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများအပေါ် အောက်ပါအတိုင်း ပြိုင်ကြလေသည်။
အင်ဂျင်နီယာ။ ။ ကဲ .. အဆောက်အအုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် ပုံစံရေးဆွဲပြလိုက်ပါ။
Author: lubo601 | 9:52 AM | No မှတ်ချက် |
ခရီးသွား နတ်သား ၂ ဦး
Author: lubo601 | 9:50 AM | No မှတ်ချက် |
ခရီးသွား နတ်သား ၂ ဦးဟာ လူသား အဖြစ် ယောင်ဆောင်ပြီး လူချမ်းသာ မိသားစု တစ်ခုရဲ့ အိမ်ကို ရောက်ရှိကာ တစ်ညတာ တည်းခိုဖို့ တောင်းဆိုပါ တယ်။ မရက်ရောပေမယ့် အတင်းအကြပ်တောင်းဆိုဟန် ရှိတာကြောင့် အိပ်ဖို့ နေရာပေးရင် ပြီးရော သဘောမျိုးနဲ့ မြေအောက်က ဂိုထောင် တစ်ခုမှာ တည်းခိုနေစေ ပါတယ်။ ဒီတော့ မြေအောက်က အခန်းမှာ ပေါက်နေတဲ့ နံရံ တစ်ခုကို နောင်တော် နတ်သားက ဖာထေးပေးလိုက်သတဲ့။
Author: lubo601 | 9:49 AM | No မှတ်ချက် |
ကျောက်မီးသွေးမတူးဖော်ရန် ကုမ္ပဏီများအား ဘန်းချောင်းဒေသခံများ တောင်းဆို
ပဟေဠိဆန်ဆန် ပျောက်ဆုံးနေသည့် ကင်ဂျုံအန် အကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယား ဖွင့်ချ
Black List သတ်မှတ်ခံရသူ တရုတ်နိုင်ငံသား မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
အစ္စရေးတွင် ဇနီး ၂၁ ဦးနှင့်သမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းကျူးလွန်သူကို ထောင်နှစ် ၃၀ ချမှတ်
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ကမ်းပါးပြိုကျမှုဖြစ်ပွား
လိပ်ကျွန်းသူကြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပြီး သားဖြစ်သူကို ဒီအန်အေစစ်မည်
တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင် လုံခြုံရေး တင်းကြပ်စွာ စီစဉ်
Author: lubo601 | 9:18 PM | No မှတ်ချက် |
ကိုချစ်တစ်ယောက် သူ့ သူငယ်ချင်းကို စက်ဘီးအသစ် စီးလာတာမြင်တော့ တအံတသြနဲ့ 
"မင်းဘယ်တုန်းကများ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ စက်ဘီးဝယ်လိုက်တာလဲကွာ" မေးလိုက်ပါတယ်၊၊
ဒီတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက စက်ဘီးကိုဘယ်လို ရခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောပြပါတယ်၊၊
"မနေ့ က ငါလမ်းလျှောက်နေတုန်း စက်ဘီးစီးလာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က ငါ့ရှေ့ ရောက်တော့ စက်ဘီးကိုရပ်၊ အဝတ်တွေဆွဲချွတိရင်း ရှင်ကြိုက်တာယူပါတဲ့။
အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ အမျိုးသားရဲ့ အိမ်မှာ နေရပါတယ်။ ဒီတော့ ယောက္ခမနဲ့ နေ့တိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံရပြီး ဘယ်လိုမှ မတည့်ဘူးတဲ့။ စကားများရ၊ ရန်ဖြစ်ရ ခဏခဏ ဖြစ်ပြီး စိတ်လည်း အင်မတန် ညစ်သတဲ့။ ယဉ်ကျေးမှုအရလည်း ဖြစ်၊ ဘာသာရေးအရ လည်း ဖြစ်တော့ ယောက္ခမကို ကြည့်မရလည်း ထမင်းခူးပေးရတယ်။ ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်။
Author: lubo601 | 9:03 PM | No မှတ်ချက် |
- ပဋိပက္ခဆိုတာ လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်တာမှမဟုတ် ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးသွားတာ (ဥပမာ- အစိုးရကို ပြည်သူက မယုံတော့တာ) ဟာလည်း ပဋိပက္ခပဲ။ ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ အကြမ်းဖက်ဆုံးနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်ပြီးတော့ လူထုအကြားမှာ တအုံ့ နွေးနွေး ကြိမ်မီးအုံးနေတဲ့ မကျေနပ်မှုတွေဟာလည်း ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ ဆုတ်ယုတ်ပျက်ဆီးစေတဲ့ ပဋိပက္ခပဲ (protracted social conflict)။ ဒီနေရာမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို ရှာဖွေတဲ့အခါ တရားနည်းလမ်းကျခြင်း (legitimacy) မကျခြင်း ဟာ အဓိကကျတဲ့ပင်ရင်းမောင်းနှင်းအားဖြစ်လာတာကိုတွေ့ ရတာပဲ။ကနေ့ ခေတ်ဟာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကျယ်ပြန့် လာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာ တရားနည်းလမ်းတကျဖြစ်တဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်သည်ပင်လျှင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းမှာ လူ့ အခွင့်အရေးကိုဖေါ်ဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနယ်ပယ်မှာ တရားနည်းလမ်းကျတဲ့ အစိုးရလို့ သတ်မှတ်လို့ မရတော့ဘူး ။
Author: lubo601 | 8:51 PM | No မှတ်ချက် |
မိုက်ခရိုဆော့ခ်၏ ဖခင် Bill - Gatesမှာ မတော်တဆ
ကားတိုက်မှုဖြင့်သေဆုံးသွားသည်။ (တကယ်မဟုတ်ဘူးနော် နောက်တာ)
ယမမင်း။ ။ " ခင်ဗျားကို နတ်ပြည်ပို့ရမလား၊ ငရဲပြည်ပို့ရမလား ဆုံးဖြတ်လို့...
Author: lubo601 | 8:38 PM | No မှတ်ချက် |
YoYarLay with Phwe Phwe and6others
အိမ်တွေကို လိုက်တံခါးခေါက်လို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းရတဲ့ ၁၀ နှစ်သားအရွယ် ကလေးငယ်လေး တစ်ဦးရှိပါတယ်။ မိဘဆင်းရဲတာကြောင့် သူ ကျောင်းတက်ဖို့ အတွက်ကို အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အလုပ်လုပ်ပြီး ငွေရှာရပါတယ်။ နေပူကြဲကြဲ ထဲ သွားရင်း တစ်အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ အောင့်မထားနိုင်တဲ့ အဆုံး ရေတစ်ခွက် တောင်းသောက် ပါတော့တယ်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကိုမပြင်ဘဲ ကာလုံအခန်းကဏ္ဍတိုးမြှင့်ရန် တပ်မတော်အကြံပြု
ထိုင်းလူငယ်ကို မဖွယ်မရာပြုမှုဖြင့် ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသား ထောင်ဒဏ် ၃၇ နှစ် ချမှတ်ခံရ
အမျိုးသားတဦး ISIS မှစေလွှတ်လိုက်သည်ဟု ဟစ်ကြွေးလျက် ခွေးမအား ဗလက်ကာယပြုကျင့်
ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ကျော်ချခံထားရသည့် ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၂ ဦးအမှုမှန် လူထုရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မည်
ရှားပါး ပန်ဒါဝက်ဝံ အနီမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရှိ
မသေချင်ရင် ၀န်ခံလိုက်ဆိုလို့ ကြောက်လို့ဝန်ခံရပါတယ် – မေးမြန်းချက်
ဖမ်းဆီးခံ လူငယ် ၂ ဦး၏ မိဘများ ထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကို ကန့်ကွက်လွှာ ပေးပို့
ခန်းမတစ်နေရာမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားသုံးအိမ်သာကို ဝင်ဖို့ကြိုးစားတိုင်း မအားဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဝင်ခွင့်မရပါဘူး ။
ရှုံ့ရှုံ့ မဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကို အနားမှာရှိတဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ဦးက သတိထားမိသွားတာကြောင့်.....
“ ဒီမှာ... ရှင်တော်တော် ပြဿနာတက်နေပုံရတယ်... အမျိုးသမီးအိမ်သာမှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး ။
CGI Animated Short HD: "Brain Divided" by Josiah Haworth, Joon Shik Song and Joon Soo Song
Author: lubo601 | 8:22 PM | No မှတ်ချက် |
AIDS ရောဂါပိုးကို ကို နိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးစွမ်း
Author: lubo601 | 8:21 PM | No မှတ်ချက် |
ရွှေ ဥ ဒေါင်း added2new photos.
ပြည်တွင်းမှာ AIDS လူနာ (ဆေးစစ်၍ သိရသူ) တသိန်းနှစ်သောင်းကျော် ရှိတဲ့အနက် ART (ဝေဒနာရှင်များအတွတ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမားရေးဌာနမှ အထူးထုတ်ထားသည့် ဆေး) မပေးနိုင် သူ နှစ်သောင်းကျော်ရှိနေတော့စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပြီး ဒီဆေးရတဲ့အထိစောင့်နေစရာမလိုပါဘူး။
ဒီရောဂါပိုးရှိနေတယ်လို့ သိရတဲ့သူတော်တော်များဟာ စိတ်ထိခိုက်ခြင်း-စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကြောင့်
ရန်ကုန်မြို့တွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် ယာဉ်လိုင်း စတင်ပြေးဆွဲ
ဟာဝိုင်အီတွင် ချော်ရည်များ ကျဆင်း၍ ရွှေ့ပြောင်းရန်သတိပေး
မြန်မာပြည်သူများ၏ အားပေးမှုကို မျှော်လင့်နေဟု အလှမယ်ပြော
ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူသင့်
အရှိန်မထိန်းနိုင်သော ဆိုင်ကယ်မှ သစ်ပင်အား ၀င်ရောက်တိုက်မိသဖြင့် မောင်းနှင်သူ သေဆုံး
ကလေး ငယ်တစ်ဦး အိပ်ခန်း ကြမ်းပေါက်မှ ချောင်းစပ်သို့ ပြုတ်ကျ ခဲ့သဖြင့် ရေနစ် သေဆုံး
ကိုပါကြီးအမှု လိုအပ်ရင် တရားဥပဒေအရ ကူညီပေးမည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီပြော
ချစ်ကြည်ရေး ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပွဲ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား (ဓာတ်ပုံ)
အလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီးသေဆုံးမှု တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက် ကွာဟမှု ရှိနေဟု ဇနီးဖြစ်သူ ပြောဆို
ကရင်နီပြည်လူငယ်အဖွဲ့ ကားမှောက် ၁ ဦးသေ၊ အများအပြားဒါဏ်ရာရ
ဗြိတိန်ရဲဝန်ထမ်းများ လိပ်ကျွန်းကို သွားရောက်စစ်ဆေး
တောင်အာဖရိက ဘောလုံးသမား Senzo ပစ်သတ်ခံရ
Kobani မြို့တိုက်ပွဲ ၈၀၀ ကျော်သေဆုံးပြီ
ဟာသ စုစည်းမှု (၂၃)
Author: lubo601 | 5:26 AM | No မှတ်ချက် |
လပတ်စာမေးပွဲမှာ အမှတ် ၉၀ ထဲရတဲ့ သားအတွက် သူ့အမေက အတန်းပိုင်ဆရာမကို သွားပြီး ကွန်ပလိန်း တက်တယ်... ...
"အပုဒ်စေ့မှန်တဲ့ ကျမသားကျတော့ အမှတ် ၉၀ ထဲရပြီး၊ ဘာစာမှမရေးဘဲ စာရွက်အလွတ်ကြီး ပြန်အပ်တဲ့ ဟိုကလေးကျတော့ ဘာလို့အမှတ် ၁၀၀ ပေးရတာလဲ"
Édouard-Henri Avrilအရုပ်ဖော်သော လူတို့ လှေကြီးထိုး ပုံစံ လိင်ဆက်ဆံပုံ ဇီဝဗေဒ အမြင်အားဖြင့် လိင် ဆက်ဆံခြင်း သည် အဖို လိင် အင်္ဂါ သည် အမ လိင် အင်္ဂါ အတွင်းသို့ ရောက်သော အပြုအမူ ပင်ဖြစ်ပြီး စက်ယှက်ခြင်း ဟုလည်း ခေါ်သည်။  ၄င်းနှစ်ခုသည် ဆန့်ကျင်ဖက် လိင် သို့မဟုတ် ပတ်ကျိကဲ့သို့ ဖိုမဒွိ သတ္တဝါ တွင် လိင်တူလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မိသားစုဝမ်းစာကို ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့ သူခိုးကြီးမှာ သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်.....
သားဖြစ်သူကသူ့အဖေကိုကြည့်ပြီး ...အင်း.....အဖေဒီထက်အသက်ကြီးလာရင် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒီလိုဆိုရင် မိသားစုတာဝန်ကို
ငါကပဲဆက်တာဝန်ယူရမှာ ဒီတော့ ငါ့အဖေ ပညာကိုသင်ယူမှဖြစ်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးရတာနဲ့
သူ့အဖေကိုပညာလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ တောင်းဆိုတော့သူ့အဖေကလည်း သဘောတူလိုက်တယ် သင်မယ်ပေါ့...
သူငယ်ချင်းရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်စွဲဖြင့် မိမိထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ပြန်ကြားခြင်း။
ကေအင်ယူဥက္ကဌ၏ အကြံပေး၊ ဗိုလ်မှုးကြီး
အကြောင်းအရာ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်စွဲဖြင့် မိမိထံ
ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တချို့ ထည့်သွင်းပြီး ရေးလာတဲ့ မင်းရဲ့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာကို ရလို့ ဝမ်းသာကြောင်း ပြောပါရ စေ။ လက်ရှိကေအင်ယူထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့ ရဲ့ နောက်ကွယ်က အဓိကလှုပ်ရှားနေသူဟာ သူငယ်ချင်းဘဲ ဆိုတဲ့ သတင်း ကြားနေတာ တော့ ကြာပါပြီ။ မင်းပေးတဲ့စာပါ အချက်တချက်အရလဲ အဲဒီသတင်း မှန်ကောင်းမှန်နိုင်မယ် လို့ယူဆစရာရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ရှိခဲ့စဉ်တုံးက နအဖနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မင်းက ကေအင်ယူကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိကေအင်ယူ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးဆေးဖေါက တပ်မဟာ (၆) မှုး ဗိုလ်မှုးချုပ် အဆင့်မှာ အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါခဲ့ ရတယ် ဆိုတာလေ။ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် အပါအ၀င် ထိပ်သီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေ ခုနှစ်ယောက်နဲ့ကေအင်ယူထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ခြောက်ယောက် ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ရာမှာ (ဘယ်ဘက် ခြမ်း ဒုတိယနေရာ) သူငယ်ချင်းက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုး နဲ့လက်ခြင်းခိုင်ခိုင်တွဲထားတာလဲ သတိထားလိုက်မိ ပါရဲ့ ။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်း အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတာ ကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
Author: lubo601 | 9:15 PM | No မှတ်ချက် |
တယ်လီနော ဆင်းကတ်များ ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ရောင်းချ
ဂျပန်အဘိုးအိုအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ထိုင်းစုံတွဲ အခြားလူသတ်မှုဖြင့် ထပ်မံစွဲချက်တင်ခံရ
ပုဂ္ဂလိကဆန်စက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး မီးကြိုးမှ လူလေးဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး အသတ်ခံရမှု အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်း ၄၀ ကျော် တောင်းဆိုဆန္ဒပြ
ရန်ကုန် စည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲ ဦးဝင်းချို ဝင်ပြိုင်မည်
သတင်းထောက်သေဆုံးမှု အဖွဲ့ ၃ဝ ကျော် သဘောထားထုတ်ဖေါ်မည်
ရေဒီယို အစီအစဉ် ရပ်နားခြင်း ရုပ်သံမှတ်တမ်း
အမှုပွဲစားများ ပပျောက်ရေး၊ အမြန်ရှင်းလင်းပေးစေချင်
ကို​ပါ​ကြီး အမှု​မှာ စစ်​တပ်​က ဥပဒေ ချိုး​ဖောက်​ခဲ့​ကြောင်း ဝေဖန်​နေ
အီ​ဘို​လာ​နဲ့ ပတ်သက်​ပြီး အမေ​ရိ​ကန် ထိန်း​ချူပ်​မှု ပုံစံ​ကို ဝေဖန်နေ
KNLA တပ်သားစောတာနိုကို သတ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသူအား ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းစစ်ဆေးနေ
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မြို့ခံနဲ့ လှုပ်ရှားသူ ပဋိပက္ခဖြစ်
မာလီ အီဘိုလာသေဆုံးမှု ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ကုလ အကူအညီပို့
အသိတရားဖြင့် ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးရမည့်ပန်း
ကရင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ဘူးပါသလား မိတ်ဆွေ။
ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဇွဲကပင်တောင်ကြီးရယ်...ဒေါန တောင်ကြီးရယ်.... ပဲခူးရိုးမ တောင်တန်းကြီးရယ်... ထင်ထင်ရှားရှား တည်ရှိပြီး အဲဒီတောင်စဉ်တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့အတူ အခြားအခြားသော တောတွေ... တောင်တွေ ချောင်းတွေ မြစ်တွေ.. လှိုဏ်ဂူတွေဟာလည်း သိပ်လှတယ်
သန့်ရှင်း သပ်ရပ်၍ ညီညာလှပစွာ ခင်းကျင်းထားသော ထိုဆိုင်လေးထဲတွင် စားသုံးသူများစွာဖြင့် စည်ကားလျှက်ရှိလေသည်။ စားပွဲထိုးလေးများကလည်း စနစ်ကျလှစွာဝန်ဆောင်မှုကောင်းလှသည်။ ထိုဆိုင်လေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုဂံမြို့လေးမှ ပင်ဖြစ်သည်။
“နေကောင်းတယ်နော်။ ဟဲ ဟဲ။ကျွန်တော် မောင်ပါကြီးပါ။ ဒါ ကျွန်တော့်သား သန်းဖေလေ။ တွံတေးသိန်းတန် အသံကလေး နားထောင်ပြီးဝင်လာတာ။ စားလို့ရပြီ ဟုတ်လား။ စားမယ်နော်။”
အရင်တုန်းကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲက ဖိုးပါကြီး နဲ့ သန်းဖေလေးတို့ အလှူတကာလိုက်စားတဲ့ အခန်းကလေး တွေးမိရင် စိတ်ထဲက သဘောကျပြီး ရယ်လို့မဆုံးဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်းအလှူ မင်္ဂလာဆောင် ဖလာကျိတ်ပြီး ကုန်းဆင်းတဲ့အခါတိုင်း “ကျွန်တော် မောင်ပါကြီးပါ။” လို့ပဲနှုတ်ဆက်တယ်။ အနောက်က လိုက်လာတဲ့သူ ရှိရင် ကျွန်တော့်သား သန်းဖေ ဖြစ်ပြီသာမှတ်။ အခုတော့“မောင်ပါကြီး” အသံနားထဲမှာ အခါခါ ကြားလျက်သားနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မရယ်နိုင်ဘူး။ ငိုချင်လာတယ်။ အမယ် သူက သူများ ပါကြီးတာနဲ့ လိုက်ပါကြီးနေတယ်။ သူဖြင့် ပါကြီး အထီးမှန်းအမမှန်းတောင်သိတာ မဟုတ်ပဲနဲ့။ ဟိုတခါ အိုအိုင်စီက ခေါင်းမြီးခြုံကြီးတွေကို “ငိုချင်းသည်မ မရွှေလှ”လို့ ခနဲ့ဖူးတဲ့ ဝဋ်တွေလည်ကုန်ပြီ။ အဲ့လိုတော့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။ ငိုမယ့်ငိုမှတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်ရောဂါနဲ့ မရဏာမင်းနောက်သို့ လှမ်းလေတယ် ရေရေရာရာ သိပြီးမှ အော်ဟစ်ပစ်ခတ်ငိုမှာပေါ့။ ငိုတာတော့ ငိုရမှာပဲ။
Author: lubo601 | 8:59 PM | No မှတ်ချက် |
- ယုံကြည်မှု ၊ တရားနည်းလမ်းကျအာဏာ၊ လူမှုအရင်း။ ဒီသုံးခုဟာ သံတူကြောင်းကွဲ စကားတွေ။ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန်အတွင်းကျ ကျ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတာ။ မြန်မာပြည်ဟာ ခုလို အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်။အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ မယားငယ် ရေအိမ်ဘ၀ ရောက်ရတာ ဒီသုံးခုကို နားမလည်တဲ့သူတွေ တစ်မိုးလုံးဖျောက်ဆိပ် ခေါင်းဆောင်တက်လုပ်ခဲ့လို့ ။
- ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်၊ ကမ္ဘာ့လက်နက်ကိုင်အင်အားအများဆုံးတိုင်းပြည်၊ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်တွေထဲက တစ်ခု၊ ကမ္ဘာ့လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ဆုံး၊ ကမ္ဘာ့ ခြစားမှုအရှိဆုံးအစိုးရတွေထဲက တစ်ခု စသဖြင့် ကမ္ဘာနဲ့ ချီ ညံ့ဖျင်းမှု ၊ ကျရှုံးမှု ၊ မိုက်မဲမှု တို့ ရဲ့ ပင်မရင်းမြစ် တရားခံ ဟာ အခြားမဟုတ်ဖူး။ ဆိုခဲ့တဲ့လူမှု သဘောတရားသုံးခုကို အလျင်းနားမလည်တဲ့ ရေဗူးပေါက်တာမလိုချင် ရေလိုချင်တာပဲသိတဲ့ ဘောင်းဘီဝတ်၊ ဘောင်းဘီချွတ်တွေ အဆက်ဆက် အုပ်ချု ပ်နေခဲ့လို့ ပဲ။ ဒီ ငမိုက်သား ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ်တွေ ဟာ အခုချိန်ထိလည်း ဒါကို သင်ယူတတ်မြောက်ဖို့ အားထုတ်ခြင်းပြုတာ မတွေ့ ရ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်နေသည့် ဒီပလိုမာသင်တန်းများ အားလုံး ရပ်ဆိုင်းရဖွယ်ရှိနေ
Author: lubo601 | 8:56 PM | No မှတ်ချက် |
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ (HRD) ဒီပလိုမာ သင်တန်းများဖွင့် လှစ်မှုကို လာမည့်နှစ်မှ စတင်ကာ ရပ်ဆိုင်းရဖွယ်ရှိနေကြောင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ စုံစမ်းသိရသည်။
CGI Animated Short HD: "Brain Divided" by Josiah H...
နှလုံးသား အများကြီးနဲ့လူ .....
ယဉ်ကျေးမှုဟု ဆိုရာတွင်…( လုံမလေးမွန်မွန် )
#‎မန္တလေးသား‬ နဲ့ ဆတ်သား
#‎ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ‬ ပြုံးပဒေသာ မေးခွန်းများ
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၁-၁၀)
ပြိတ္တာ ၁၂-မျိုးနှင့် ပြိတ္တာဖြစ်စေတတ်သော အကြောင်းများ
စံပြလင်မယား အဖိုး နဲ့ အဖွား (ပြဇာတ်)
ဟာသ စုစည်းမှု (၂၀-၁၀)
အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် အင်တာနက် ခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ)
ဂျာမန် ဆိုင်ကယ်လမ်းသရဲဂိုဏ်း ဆီးရီးယားသို့ သွားရော...
MRI Scan (အမ်-အာရ်-အိုင်)
အလှစစ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူ Turia Pitt
ဂျီဟဒ် မြန်မာပြည်၊ အယ်လ်ကိုင်ဒါနှင့် နိုင်ငံတကာ အြ...
ငါ" ကို စာလုံးသေးနဲ့ ရေးကြစို့
(‪#‎program‬ installed ) မှားယွင်းတင်မိကြမည့် prog...
ကာရံ မ ညီသော- ထူးအိ မ် သ င် ၊ပေါ က်ပေါ က်
ဟော ... ဟနဲ့ဟို က ဟိုနဲ့ဟ ... ဟော
ဟာသ စုစည်းမှု (၁၆)
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး မဟာတတိယလှိုင်း ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)
မှေးမှိန်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေရဲ့ အသံ
PayPal Account ကနေ ငွေ သွင်း/ထုတ်/လွှဲ နည်း